၁၃ ရက်နေ့က မနော်ဟရီ G & G လား Abc လားမသိ၊ အဲ့ဆိုင်မှာ ကျမ ဈေးဝယ်တော့ တံခါးပေါက်ရှေ့မှာ တောင်းဖို့ထိုင်နေတဲ့ ကလေးလေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ သူလေးဖို့ မုန့်နဲ့အအေးဝယ်သွားပြီးပေးတော့ သူကမုန့်ကိုယူပြီးဘေးချပြီး ခဲလုံးလေးတွေနဲ့ ဇယ်ခတ်နေတယ်။ အဲ့ကလုံခြုံရေးက စေတနာနဲ့ တံခါးဖွင့်ရင် သူ့ကို ခိုက်မိမှာစိုးလို့ ဖယ်ခိုင်းတော့လဲ အဲ့အထုပ်လေးတွေကိုယူ နေရာပြောင်းပြီး ဆက်ဆော့နေတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ ကြာဇံကြော်ထုပ်လေးတွေနဲ့ ကျမပေးထားတဲ့မုန့်ထုပ်လေးတွေ။ ကျမကားထဲကနေ အကြာကြီး ထိုင်ကြည့်နေသည်ထိတိုင်အောင် ကျမပေးတဲ့မုန့်ကို သူမကြည့်သလို၊ စားလဲမ စားဘူး။
ခဲလုံးလေးတွေပဲ ဆော့နေတာနဲ့ စိတ်က ဘယ်လိုမှမကောင်းတော့ဘူး။ သူ့ကို ကျမ အရုပ်ဝယ်ပေးချင်တာ၊ ကိုယ်တိုင်က လဲ ဒီကလေးကို သွားမပြောရဲဘူးရယ် ?။ အဲ့တာနဲ့အမျိုးသားကို ပြောပြတော့ သူကလဲ သဘောတူတာနဲ့ သူက ဒီကလေးလေးကို မမကအရုပ်ဝယ်ပေးမယ်တဲ့၊ ယူမှာလားဆိုတော့ ယူမယ်တဲ့ဆိုပြီး ဆိုင်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ သူ့အစ်ကိုကို သွားပြောဦးမယ်ဆိုပြီး ပြေးသွားတယ်။
သူ့အစ်ကိုကလဲ ပြေးလာပြီး မမ သားကိုလဲ ဝယ်ပေးပါတဲ့။ မင်းက ဘာအရုပ်လိုချင်တာလဲဆိုတော့ ရီမုကားတဲ့။ ကိုယ်လဲ အေးအေးဆိုပြီးဆိုင်ထဲ ခေါ်လာတော့ စောနအကြီးလေးက သူလိုချင်တဲ့အရုပ်လေးကို တန်းယူတယ်။ သူဘယ်ကထဲက လိုချင်ခဲ့လဲမှမသိတာ။ အငယ်လေးကတော့ သူပျာယာတွေခတ်ပြီး ရွေးနေတာ။ ဟယ်လီကော်ပတာရုပ်ကို အဲ့တာယူမယ်တဲ့ ၁၆၀၀၀ တန်။ အဲ့တာနဲ့ သူ့အစ်ကိုဆိုသူက အငယ်လေးကို ဟန့်တယ်ဗျာ၊ အဲ့လောက်တန်ကြီးမယူရဘူးတဲ့။
ကျမတော်တော် အံ့သြသွားတယ်။ အမှန်ဆို အလကားရတာကို ရလိုစိတ်နဲ့ ယူချင်စိတ်မရှိပဲ ဒီကလေးလေးက အလိုက်သိတတ်တာပါလားဆိုပြီး ကျမလေးစားအံ့သြသွားတယ်။ ကျမက ဖြေးဖြေးစဉ်းစားပါဆိုပြီး ပြောတော့မှ ကောင်လေးက သေချာစဉ်းစားပြီး ကားအရှည်ကြီးကို ယူလိုက်တယ်။ ကောင်တာမှာ ငွေရှင်းတော့ရီမု ကားလေးအတွက် ဓာတ်ခဲပါထည့်ပေးရင်း ပုံလေးရိုက်မိခဲ့ တယ်။ ဒီပုံလေးက ရီမုကားစမ်းမောင်းပြတာကို ကြည့်နေကြတာ ပါ။ ကျမလဲ အငယ်ကောင်လေးကို မမပေးတဲ့မုန့်ကို ဘာလို့မစား တာလဲ၊မကြိုက်လို့လားဆိုတော့ ခေါင်းလေးခါပြပြီး အမေကြီးဖို့တဲ့။
ဘယ်ကအမေကြီးလဲဆိုတော့ အကြီးကောင်လေးက သူ့အဘွားတဲ့။ ကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ကလေးငယ်လေးကြိုက်မယ့်မုန့်ကိုကျမရွေးဝယ်ပေးတာတောင် အိမ်မှာ ကျန်နေတဲ့ သူ့အဘွားအ တွက်တဲ့ ???။ ဘယ်မှာနေလဲ မေးကြည့်တော့ သံလမ်းဘေးလို့ပြောတယ်။ အငယ်လေးက ကျမသမီးကြီးလေးနဲ့ ရွယ်တူပဲ။ စိတ်တွေထဲမကောင်းလိုက်တာဆိုတာလေ။ ကျမက ဒီလို ကလေးတွေတွေ့တိုင်း မုန့်၊ အရုပ် ဝယ်ပေးနေကျ။ နောက်ခါများတော့ ဒီထက်ပို ကူညီနိုင်ပါရစေ။ဆိုင်ကအထွက်ကျ ပြောသွားသေးတယ်။မမ ကျေးဇူးပါတဲ့ ???
မှတ်ချက် – Saw Thae ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှတဆင့်ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။